Daanyeer Sababay isku dhaca Labo Qabiil & Dagaal Khasaaro geystay oo dhacay dalka Liibiya. – Xeernews24
Daanyeer Sababay isku dhaca Labo Qabiil & Dagaal Khasaaro geystay oo dhacay dalka Liibiya.
25. Dezember 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Dagaal la isku adeegsaday Taangiyo iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa uu maalmahan ka socday magaalada Sabah ee dalka Libya kaddib markii laba beelood oo lagu kala magacaabo Awlad Suleiman iyo Gaddafa ay isku dheceen daanyeer aawadii, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters.
Iska-hor-imaadkan ayaa yimid kaddib markii saddex dhallinyaro ah oo kasoo jeeda beesha Gaddafa ay daanyeer ay wateen ku direen gabadh yar oo ciyaal iskuul ah kaas oo xijaabkii ka siibay, dharkii kalena ka jeex-jeexay.
Beesha gabadha laga faduuliyay ee Awlad Suleiman oo duullaan soo qaaday ayaa waxaa ay dileen daanyeerka iyo raggii watay, waxaana ay arrintaasi u cuntami weyday beesha Gaddafa oo iyana weerar saf ballaadhan ah ku soo qaadday qoladii kale.
16 ruux ayay iska dileen labada dhinac, waxaana ku dhaawacmay dagaalkaasi tiro kor u dhaafeysa 50 ruux.
Dagaalka labadan beelood ayaa waxaa uu socday saddex maalmood, iskii ayuuna isaga qaboobay iyada oo aanay ciidna soo kala gaadhin labadan beelood, laakiin waxaa xidhan isu socodka xaafadaha ay ku dagaallameen oo ay dhufeyso wali isugu jiraan.
Tan iyo sidii xukunka looga tuuray madaxweynihii dalkaasi Liibiya Mucammar Al-Qaddaafi sannadkii 2011 ayaa waxaa dalka Liibiya hadheeyay dagaallo qabali ah kuwaas oo waddanka kala jar-jaray, qabiil walbana magaalo xidhay isaga oo si culus u hubaysan, xataa qabaa’ilada qaarkood waxa ay haystaan dabbaabado iyo dayuurado dagaal.
Dhacdadan ka dhacday waddankaasi Liibiya ayaa waxa ay noqotay mid dadweynaha adduunkan ku nooli ay aad ula yaabaan iyaga oo ku tilmaamay in ay tahay mid ka mid ah dhacdooyinka ugubka ah ee kownkan ka dhaca.
Badiba xayawaanka loo yaqaan daanyeerka ayaa waxa uu ka mid yahay mid aad ugu badan deegaankaasi halkaasi oo dadku khaatiyaan ka joogaan isaga oo dhibvaato ku haya dalaga, iyo dadkaba.
Qabiilada ku nool deegaanka dhacdadani ka dhacday ayaa dadka ku nooli badiba ay yihiin kuwo hubaysan oo haddii dagaal dhacaba khasaaraha ka dhashaa uu noqdo mid aad u badan, tanina waxa uun ay ka mid tahay iska hor imaadka ka dhaca deegaankaasi.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/12/daanyeer.jpg 168 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-12-25 13:45:302017-12-25 13:45:30Daanyeer Sababay isku dhaca Labo Qabiil & Dagaal Khasaaro geystay oo dhacay dalka Liibiya.
Xaaladda Magaalada Diri-dhaba oo Foolan. Warar Goos-goos ah iyo Xaalada maanta ee Itoobiya